N5 Basic Grammar & Practice အခြေခံသဒ္ဒါပုံစံနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
Mioka Ei Ei Chaw (Time Study Japanese Language Education Center)
Advanced Grammar in Use with Answers: A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced Learners of English (Advanced Grammar ကို လွယ်ကူစွာ နားလည်စေဖို့ အရှင်းလင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘာသာပြန်ဆို ပြုစုပေ
ဆရာမိုး (Follow me)
LCCI Level 1 -2(Bookkeeping & Accounting) (အခြေခံစာရင်းကိုင်လက်စွဲ) (အတွဲ ၂)
English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate : Vocabulary Reference and Practice (Fourth Edition)
Category: Language / Linguistics
ခေတ်ပြိုင်စပိန်အစ္စလာမ်နိုင်ငံတော်သမိုင်း (၇၁၁- ၁၄၉၂) (Al Andalusia: the Contemporary accounts of the Islamic Spain (711 - 1492 AD))
LCCI Level 1 -2(Bookkeeping & Accounting) (အခြေခံစာရင်းကိုင်လက်စွဲ) (အတွဲ ၁)
ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီ (Social Democracy) (Prosperity for All, Property for Everyone)
စိုင်းသီဟ (ဆေး - ၁)
“Myanmar Studies from Center, Periphery and Boundary: (Old View, New Version) An Interdisciplinary International Symposium” (Vol 1) (Preceedings of the Conference on Myanmar Studies 16 - 17 September
Shah Alam , San Win, et al , Pyiet Phyo Kyaw , Gyles Iannone , Scott Macrae , Dr. Sanda Linn , Caitriona O'Connor , Dr. Waing Waing Aung , Thanyarat Apiwong , Swam Pyae , Eric Vanden Bussche , Dr. Rosalie Metro , Maitrii Aung-Thwin , Sint Sint Myat
“မြန်မာ့အာမခံစျေးကွက်အတွင်းမှ အသက်အာမခံပေါ်လစီများ” (Life Insurance Policies in Myanmar Market)
ဌေးပိုင် (အာမခံ) (B.A, DEP, DA, ACII (London))
​MDRT Agent တစ်ယောက်၏ လျှို့ဝှက်အရောင်းနည်းစနစ်များ (Selling Secrets From The Insurance MDRT Agent)
အောင်မျိုးပိုင် (Mr. Paing) (2x MDRT Financial Advisor & Coach)
facebook ပေါ်မှ ဓမ္မမှတ်စုများ ((၁၁-၈-၂၀၁၅) မှ (၁၆-၉-၂၀၁၈)) (မိတ္တူ)
မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဦးမောင်မောင် (ပျဉ်းမနား)
Category: ကွန်ပျူတာ / အင်တာနက်
လုပ်ငန်းခွင်မှာ တရားမှတ်နည်း (Meditation at Workplaces)
အောက်စဖို့ဒ် ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဓမ္မသာမိ (D.Phil (Oxford))
မြန်ဆန်လွယ်ကူ ရုပ်ပြအင်္ဂလိပ်စကားပြော (အတွဲ ၃)
ယောသာသနာဝင် (The Chronicle of Buddha's teaching in Yaw (Yonaka), Myanmar)
ဦးဇာနည်အောင် (B.Econ. Economics)
ကောက်ရိုးတစ်မျှင် တော်လှန်ရေး (သဘာဝစိုက်ပျိုးရေးမိတ်ဆက်)
ဒေါက်တာဟန်ဖြိုးအောင် (Myanmar Farmers' Academy)
Gurugi S. N. Goenka
လေလှိုင်းသဒ္ဒဗေဒနှင့် မြန်မာ့သဒ္ဒဝိဝုဍ္ဎိ နိယာမဗေဒ (လေလှို င်းသဒ္ဒဗေဒနှင့် မြန်မာစကားသံ ပြောင်းလဲမှုစနစ်) (ဘွဲ့လွန် ဘာသာဗေဒ ကျမ်းပြုသူများနှင့် သုတေသီများ၏ ဘာသာ စကား လေ့လာတင်ပြမှုအတွက် သီအိုရီသဘ
ဒေါက်တာသိန်းထွန်း (B.A Hons. (YGN), M.A, Hons., Ph.D (Macquarie), Grad. Dip.Lib. (Canberra))
ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ပြောင်းရွှေ့ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးစားနေသည့် ဘင်္ဂါလီ (Displacement with Dignity: Bangali)
နိုင်ဦး - ၁၁၉ (Master Trainer and Founder of Myanmar Fitness Trainer Academy)
မူကြိုအရွယ် ကလေးတို့ ဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေဖို့ (Pre-school Activites Book) (Age 3+)
True Learning စာတည်းအဖွဲ့
Excel for Accounting (Excel 2019)
Purabheda Sutta Dhamma ot The Dhamma One Should Accomplish Before Death by The Venerable Mahasi Sayadaw
U HTIN FATT, D.P.P.S
English Vocabulary in Use Elementary Book with Answers: Vocabulary Reference and Practice (Third Edition)
Interchange Intro Student's Book with Online Self-Study + Workbook Jack C. Richards
Practical Guide to IELTS (Reading Passages for Advanced Learners) (Sentence Analysis of TOEFL IELTS SAT GMAT Passages)
Category: ပညာရေး , ဘာသာစကား / ဘာသာဗေဒ
ဈေးကွက်ကို စနစ်တကျ အနိုင်ယူနည်း (Price Action Trading)
Facebook Digital Marketing 2021
Facebook MEDIA BUYING & PLANNING MARKETING GUIDE
ပရိုက်စ်အက်ရှင်နည်းစနစ်များ (Forex Price Action Strategies)
Practical IOT with NODEMCU
K Xan Htike (C GEE)
ပြိုကွဲလွယ်သော ချည့်နဲ့အခြေအနေမှ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးသို့ ကွန်ဖရင့်အစီရင်ခံစာ (From Fragility to Peace And Development) (Conference Report) (Academic Seminar)
မြန်မာ့မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒလေ့လာရေး အင်စတီကျု (ISP)
စာတစ်လုံး (အတွဲ ၃) (လူ့ပြည်လာ ငွေရှာဖို့လားနှင့် facebook ပေါ်က စာစုများ)
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအမျိုးမျိုးနှင့် ဒီမိုကရေစီသို့ပြောင်းသော နိုင်ငံများ၏ ခရီး (Constitutions and Journies of Democratic Transactional Countries)
ပဋ္ဌာန်း (၂၄) ပစ္စည်း ပါဠိ၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သရုပ်ဖော် ရှင်းလင်းချက် (PATTHANA PACCAYUDDESA IN PALI - MYANMAR - ENGLISH WITH ILLUSTRATIONS)
အရှင်ဣန္ဒက (ဒွိပိဋကဓရ၊ အဂ္ဂမဟာအကျော်၊ ဝိနယပါဠိပါရဂူ)
COVID အလွန်ကို ဖြတ်ကျော်ခြင်းနှင့် Kaizen စာစုများ
ကျော်မင်းဟန် (Kaizen Practitioner)
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေ့စဉ်ပြောကြား အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စကား စစ်စစ် (Everyday Conversations: Learning American English)
Autodesk Revit (Architecture & Structure Modelling Essential) (With Basic Component Creation)
ဆရာမျိုးလွင် (B.E (Civil)) (Specialist Dip in BIM) (BCA Academy (Singapore))
ဗေဒါလမ်း (The Hyacinth Way) (အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ)
အဖြူ အမည်း (မိဘများအတွက် လမ်းညွှန်) (Black & White flash cards)(for ages 0+, 3+ months)
ကိုယ့်ရှုး ကိုယ်ပတ် (တရုတ်ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်) (Attack your shield with your spear)
ရန်သူ့ထံမှ မြားတွေငှားခြင်း (တရုတ်အတွေးအခေါ်ပုံပြင်) (Borrowing light throughacrack in the wall)
ယုန်နဲ့လိပ် အပြေးပြိုင်ပွဲ(Rabbit and tortoise have race)
လက်တွေ့သုံး အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ (English Grammar Practical Usage and Exercises (With Answer))
လုပ်ငန်းအတွက် ဖေ့ဘုတ် (အဆင့်မြင့်လမ်းညွှန်) (သင့်လုပ်ငန်းကို အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါ) (Facebook for Business) (Guidebook for Advancer) (Level Up Your Business)